blackmagic - အသံလွှင့်ဘိခြင်းဖြင့် NAB ပြရန်သတင်း, NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့် - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်
Home » Tag Archives: blackmagic
Fremont, CA - သြဂုတ်လ 16th, 2019 - Blackmagic ဒီဇိုင်း, DaVinci စတူဒီယိုတည်းဖြတ်ရေးဖြေရှင်းခြင်း, 2019 နွေရာသီရာသီရဲ့ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရုပ်ရှင်ထုတ်၏နံပါတ်င်း၏ဒစ်ဂျစ်တယ်ရုပ်ရှင်ကင်မရာအပါအဝင်ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ post ကာလအတွင်းမြောက်မြားစွာ Blackmagic ဒီဇိုင်းထုတ်ကုန်ကိုအသုံးပြုကြောင်းယနေ့အမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုအရောင်ဆုံးမခြင်းထုတ်ပြန်ကြေညာ (VFX) နှင့်အသံ post ကိုထုတ်လုပ်မှုလျှောက်လွှာများနှင့်ထို့ထက် ပို. ။ ဒါဟာအကြီးမားဆုံး Blockbuster အချို့ကိုထည့်သွင်းခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ထား ...
Blackmagic ဒီဇိုင်းကြေညာချက်များ DaVinci 16.1 ဖြေရှင်း
Fremont, CA, USA သို့ - ကြာသပတေးနေ့, 8 သြဂုတ်လ 2019 - Blackmagic ဒီဇိုင်းယနေ့ DaVinci 16.1, ကုမ္ပဏီရဲ့လူကြိုက်များပြင်ဆင်ရန်, အရောင်, အမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုများနှင့်ဖန်တီးကူညီပေးဖို့သစ်ကိုဖြတ်စာမကျြနှာကိုအဓိကမွမ်းမံမှုများပါဝင်သောအသံဖိုင် post ကိုထုတ်လုပ်မှုဆော့ဖ်ဝဲကိုအသစ် update ကိုဖြေရှင်းထုတ်ပြန်ကြေညာ ကမ္ဘာ့အမြန်ဆုံးအယ်ဒီတာ။ DaVinci 16.1 အများပြည်သူ beta ကိုဖြေရှင်းသည့်အနေဖြင့်ယခု download ပြုလုပ်မရရှိနိုင်ပါသည် ...
Pocket ရုပ်ရှင်ရုံကင်မရာ 4K ပြီးတော့ Pro ကို URSA Mini ကိုအတူအဆိုပါနက်ရှိုင်းသောရိုက်ချက်များသိပ္ပံ Channel ကိုရဲ့ Legends
Fremont, CA - သြဂုတ်လ 6, 2019- Blackmagic ဒီဇိုင်းယနေ့ကနေဒါအခြေစိုက်: Echo ဂလားပင်လယ်အော်မီဒီယာအားလုံးကိုအသစ်ကသိပ္ပံ Channel ကိုစီးရီးအပေါ် Pro ကိုနှစ်ခု Blackmagic Pocket ရုပ်ရှင်ရုံကင်မရာ 4Ks နှင့် Blackmagic URSA Mini ကိုအသုံးပြုခဲ့ကြောင်းကြေညာအဆိုပါ Pocket ရုပ်ရှင်ရုံ "ဟုနက်ရှိုင်း၏ Legends ။ " ကင်မရာ 4Ks သည့်ရေနေစီးရီးများအတွက်ရေအောက်ရိုက်ချက်ဖမ်းမိ, ပြီးတော့ DaVinci စတူဒီယိုအသုံးပြုခဲ့သည်ဖြေရှင်း ...
URSA Mini ကို Pro ကို 4.6K G2 Defqon.1 Dance ပွဲတော်ဘို့က Ultra HD ကိုလွှမ်းခြုံဘဝမှကယျတငျ
Fremont, CA- သြဂုတ်လ 6th, 2019 -Blackmagic ဒီဇိုင်းယနေ့ဒတျချြမာပြင်းမြန်စတိုင်ကခုန်ပွဲတော် Defqon.1 က Ultra HD ကိုတိုက်ရိုက်ထုတ်လုပ်မှုများအတွက် URSA Mini ကို Pro ကို 4.6K G2 နှင့် ATEM4M / E ကိုအသံလွှင့်စတူဒီယို 4K featuring တိုက်ရိုက်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းအသွားအလာအပေါ်မှီခိုကြောင်းကြေညာခဲ့သည်။ အဆိုပါပွဲတော်မှာအားလုံးကဗီဒီယိုလိုအပ်ချက်များကို Maartens အသံ & နေဖြင့်ထောက်ပံ့ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်အတူ, Outsourcing ထုတ်လုပ်မှုမိတ်ဖက် NEP နေဖြင့်ကိုင်တွယ်ခဲ့သည် ...
Fremont, CA - ဇူလိုင်လ 16, 2019 - Blackmagic ဒီဇိုင်းရုပ်ပုံ Block ကို DaVinci သစ်ကို COLORSPACE 4K HDR ကိုစိစစ်အခန်းထဲမှာမော်တော်ယာဉ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ် HDR ကိုအရောင်ဆုံးမခြင်းနှင့်တည်းဖြတ်ပေး Mini ကို Panel ကိုဖြေရှင်းစတူဒီယိုနှင့် DaVinci ဖြေရှင်းရာတွင်အသုံးပြုကြောင်းယနေ့ကြေညာခဲ့သည်။ COLORSPACE အခြား Blackmagic ဒီဇိုင်းထုတ်ကုန်များ၏နံပါတ်သုံးပြီး 12G နှင့် 4K လုပ်ငန်းအသွားအလာပါဝင်သည်။ Los Angeles မြို့ရဲ့ရုပ်ပုံကို Block '' ...
ဘရော့ဒ်ဝေးရဲ့ကွန်ယက် Blackmagic Micro နဲ့စတူဒီယိုကင်မရာ 4Ks နှင့် ATEM Switcher အသုံးပြု
Fremont, CA - ဇူလိုင်လ 9, 2019 - Blackmagic ဒီဇိုင်းယနေ့တိုနီ Broadway မှအနိုင်ရသည့် hit "ကွန်ယက်" ညာဘက်ကိုတိုက်ရိုက်သတင်းထုတ်လွှင့်အလယ်၌သူတို့ကိုချပြီး, ပရိသတ်ကိုအဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့စွဲငြိဖွယ်ရာအတွေ့အကြုံကဖန်တီးကူညီဖို့ရန်၎င်း၏ထုတ်ကုန်ကိုအသုံးပြုကစားကြောင်းကြေညာခဲ့သည်။ ဗီဒီယိုဒီဇိုင်နာနှင့်ရိုက်ကူးရေးခေါင်းဆောင် Tal ယော်ဒန်မြစ် Micro နဲ့စတူဒီယိုကင်မရာ 4Ks, စတူဒီယိုကင်မရာ 4Ks အသုံးပြုသော, ဗီဒီယို, 4K မော်နီတာ / အသံဖမျး Assist ...
Apex အသံလွှင့် 8 Blancpain GT ကိုကမ္ဘာ့စိန်ခေါ်မှုအမေရိကတိုက်များအတွက် ATEM နက္ခတ် 2019K အပေါ်မှီခို
Fremont, CA - ဇူလိုင်လ 2, 2019 - Blackmagic ဒီဇိုင်းယနေ့အသံလွှင့်, Apex အသံလွှင့်ပု ATEM နက္ခတ် 8K ခလုတ်တွေနဲ့ထုပ်ပိုးနေတဲ့ထုံးစံ OB ထရပ်ကား, ATEM2M / E ကိုအသံလွှင့် Panel ကိုသုံး ATEM ကင်မရာ Control Panel များ, 13 URSA အသံလွှင့်ကင်မရာများတည်ဆောက်ခဲ့သည်ကြေညာခဲ့သည် Videohub router ကိုလေး HyperDeck စတူဒီယိုအသံဖမျးနှင့် 30 ထုတ်လွှင့်ဖို့ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 12 Mini ကို Converter Optical Fiber 2019G converters အဖြစ် ...
Fremont, CA - ဇွန်လ 28, 2019 - Blackmagic ဒီဇိုင်းယနေ့ Duplitech, LA မြို့ရဲ့အများဆုံးလေးစားဖွယ်လွတ်လပ်သောမီဒီယာဝန်ဆောင်မှုကိုလက်တွေ့စမ်းသပ်ခန်းထဲကတစ်ခုမြင့်မား dynamic range ကိုများအတွက် Cintel Scanner2(HDR) ရုပ်ရှင်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့အပါအဝင် Blackmagic ဒီဇိုင်းဂီယာတစ်ခုအိမ်ရှင်သုံးပြီးကြောင်းကြေညာခဲ့သည်။ Duplitech Cintel Scanner2အဆိုပါ onboarding စဉ်မကြာသေးမီကဒြပ်စင်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့ရှိခြင်း, 16mm ရုပ်ရှင်အပေါ်အတော်လေးကောင်းစွာလုပ်ဆောင်ကြောင်းတွေ့ရှိရ ...
DaVinci ဖြေရှင်းရန်စတူဒီယိုနှင့်အတူ Elton John ရဲ့ Rocketman grade
Fremont, CA- ဇွန်လ 20, 2019 - Blackmagic ဒီဇိုင်းယနေ့ယင်း၏ DaVinci စတူဒီယို Marv ရုပ်ရှင် & Rocket ရုပ်ပုံများနှင့့် Dexter မန်ယူဒါရိုက်တာကထုတ်လုပ် Elton John ရဲ့အောင်မြင်မှုများနှစ်ပေါင်းအကြောင်းကို Paramount ရဲ့အသစ်ဂီတအတ္ထုပ္ပတိရုပ်ရှင်အပေါ်အရောင်ပိုက်လိုင်းတလျှောက်လုံးအသုံးပြုခဲ့သည်ဖြေရှင်းကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်ရှိပါတယ်။ set ကို DIT လုပ်ငန်းအသွားအလာအပေါ် DP ဂျော့ခ်ျ Richmond, B.Sc, Rocketman ရဲ့အားဖြင့် Lensed ဖွံ့ဖြိုးပြီးနှင့်စတင်ခြင်းကစီမံခန့်ခွဲခဲ့ပါတယ် ...
Qoncept Inc ကို, အစေးခြေရာကောက်စနစ် Baseboy များအတွက် DeckLink SDI Micro နဲ့အသုံးပြု
Fremont, CA - ဇွန်လ 18, 2019 - Blackmagic ဒီဇိုင်း Blackmagic ရဲ့ DeckLink SDI Micro နဲ့ဘောလုံးရဲ့လမ်းကြောင်းကိုနေပုံကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါနှင့်အတူ interlocking နိုင်စွမ်း Qoncept Inc ကိုအားဖြင့်အစေးခြေရာခံခြင်းစနစ်က "Baseboy," အသစ်ထုတ်ပြန်ကြေညာသည့်စနစ်နှင့်အတူဖမ်းဆီးရမိခြင်းနှင့်ပြန်လည်ပြသခြင်းအတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်ကြောင်းယနေ့ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည် ကင်မရာအစာကျွေးခြင်း။ Baseboy ပထမဦးဆုံးအတွက်တစ်ဦး Blackmagic Micro နဲ့စတူဒီယိုကင်မရာ 4K နှင့် တွဲဖက်. သုံးခဲ့ပါတယ် ...
Fremont, CA - ဇွန်လ 14, 2019 - Blackmagic ဒီဇိုင်းယနေ့တောင်ကိုရီးယားအခြေစိုက်လွတ်လပ်သောစံချိန်တံဆိပ် Areia ဖန်ဆင်းခြင်း Blackmagic သုံးပြီး Blackmagic ဒီဇိုင်း Pocket ရုပ်ရှင်ရုံကင်မရာ 4K နှင့် URSA Mini ကို Pro ကိုကင်မရာများပေါင်းစပ်နှင့်အတူအနုပညာရှင်များက Musky နှင့်ကူးတို့အဘို့အက၎င်း၏နောက်ဆုံးပေါ်သီချင်းဗီဒီယိုများပစ်ခတ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည် RAW codec ။ အဆိုပါဗီဒီယိုများထို့နောက် edited နှင့် Mini Panel ကိုဖြေရှင်းနေတဲ့ DaVinci နှင့်အတူစတူဒီယိုဖြေရှင်း Davinci သုံးပြီးအဆင့်အလိုက်သတ်မှတ်ထားသောခဲ့ကြသည်။ ချဲ့ထွင်ရန်ရည်ရွယ် ...
Fremont, CA - ဇွန်လ 12, 2019 - Blackmagic ဒီဇိုင်းယနေ့ ASTROLab တောင်ပိုင်းကျူးဘက်မှာရှိတဲ့ Mont-Méganticအမျိုးသားဥယျာဉ်မှာတည်ရှိပါတယ်တစ်ခုနက္ခတ္တဗေဒလှုပ်ရှားမှုစင်တာအပါအဝင်, Blackmagic ဒီဇိုင်းထုတ်ကုန်န်းကျင်သစ်တစ်ခု 12G-SDI AV စနစ်နှင့် streaming များလုပ်ငန်းအသွားအလာတည်ဆောက်ခဲ့သည်ကြေညာခဲ့သည် တစ်ဦး ATEM ထုတ်လုပ်မှုစတူဒီယို 4K, Blackmagic eGPU နှင့် Blackmagic Web ကို presentation ။ အသစ်လုပ်ငန်းအသွားအလာအင်အားကြီးအတွက် ASTROLab ရဲ့နေ့စဉ်သိပ္ပံတင်ပြချက်များ ...
Blackmagic ဒီဇိုင်းနှင့်အတူပိုလန်အက်ဖ်အေအဘို့အ Transmijelive တိုက်ရိုက်လွှ
Fremont, CA - ဇွန်လ 11, 2019 - Blackmagic ဒီဇိုင်းယနေ့ URSA အသံလွှင့်ခြင်းနှင့် ATEM2M / E ကိုထုတ်လုပ်မှုစတူဒီယို 4K featuring ထုတ်လွှင့်လုပ်ငန်းအသွားအလာအပြင်ဘက်တွင်တစ် multicam, Polski Zwiazek, ပိုလန်ရဲ့အမျိုးသားရေးဘောလုံးအသင်းအဖွဲ့များအတွက်တိုက်ရိုက်လွှင့်အကြောင်းအရာတစ်ခုကျယ်ပြန့်ဖြူးကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည် Pilki Noznej (PZPN) ။ ထုတ်လုပ်မှုအထူးကုအသက်ရှင် transmisjelive, PZPN ရဲ့ယူကျု့ချန်နယ်, Łączy nas piłkaအားလုံးကိုအကြောင်းအရာထုတ်လုပ် ...
Showtime ၏ The Chi အသက်ရ Southside ချီကာဂိုကိုယူခဲ့ဖို့ Blackmagic ဒီဇိုင်းကင်မရာများကိုအသုံးပြု
Fremont, CA - ဇွန်လ 4, 2019 - Blackmagic ဒီဇိုင်း Showtime ကွန်ယက်၏သဘာဝသရုပ်ဖော် '' "ဒီ Chi" ဓါတ်ပုံပညာကိုအာဗြဟံ Martinez ၏ဒါရိုက်တာအဘို့, URSA Mini ကို Pros နှင့် Micro စတူဒီယိုကင်မရာ 4K အပါအဝင် Blackmagic ဒီဇိုင်းကင်မရာများ၏ကျယ်ပြန့်ခင်းကျင်း, ထည့်သွင်း '' ယနေ့ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည် ချီကာဂိုရဲ့တောင်ဘက်ခြမ်း။ "ဒီ Chi" သူတို့မိဘများခေါင်းကိုအဖြစ်ကြောငျးအတှကျ prepping ချီကာဂိုလေးတွေများအတွက်ပျမ်းမျှတစ်ရက်သရုပျဖျော ...
Blackmagic ဒီဇိုင်း DisplayPort 8K HDR ကိုနယူး Teranex Mini ကို SDI ကြေညာ
သငျသညျအစုပေါ်နဲ့ post ထုတ်လုပ်မှုအတွက်အရောင်အရေးပါရည်ညွှန်းမော်နီတာအဖြစ်သစ်ကို Apple က Pro ကိုပြရန် XDR ကိုအသုံးပြုထားတယ်ကြောင်းအဆင့်မြင့် 8K စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုဖြေရှင်းချက်! Fremont, CA, USA သို့ - တနင်္လာနေ့,3ဇွန်လ 2019 - Blackmagic ဒီဇိုင်းယနေ့မျက်နှာပြင်နယ်ပယ်ထပ်ပေါ် DisplayPort 8K HDR, Dual နဲ့အဆင့်မြင့် 8K DisplayPort စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုဖြေရှင်းချက်မှ HDR, 33 အမှတ် Teranex Mini ကို SDI ထုတ်ပြန်ကြေညာ ...